Istaraatijiyadaha Awoodda leh ee Carruurtaadu ugu Shaqeyn karaan Gurigooda | Bezzia
Maria Jose Roldan | | Talada hooyooyinka, Carruurta wax baro, Hooyooyinka
In kastoo aysan u ekaan karin mararka qaarkood, carruurtu had iyo jeer waxay rabaan inay ka farxiyaan oo ay la shaqeeyaan dadka waaweyn. Ilaa iyo inta rabitaankaaga dabiiciga ah ee ah inaad ka farxiso oo aad iskaashi la shaqeyso. Aadanaha da 'kasta ha lahaadee wuxuu ku xiran yahay inuu is dhageysto. Caadi ahaan, waanu iska caabbinaa jihada kuwa ka baxsan "tuulada ku lifaaqan", waxaana naloogu talagalay in aan raacno kaliya tusaalaha kuwa dareen ahaan aan ku xirnahay.
Haddii aad rabto inaad wax ka qabato asalka waxa ku qasbaya cunug inuu noqdo mucaarad, fiiri xiriirka aad la leedahay iyaga. Ma caafimaadbaa mise waa jilicsan? Haddii xiriirka guud uusan xooganeyn, miyaad waqti ku bixineysaa sii xoojintiisa, mise waxaad diirada saareysaa sida ugu wanaagsan ee loo fuliyo u hogaansanaanta? Haddii lammaanahaagu aanu wada-shaqeyn lahayn oo uu iska caabiyo xiriirka adiga, ma ku bixineysaa waqti iyo dadaal aad ku xalliso dhibaatooyinka? Waa isku mid carruurta!
Sidoo kale, haddii carruurtaadu adkaysi u yeeshaan inay caawiyaan markaad weydiisato ama aad raacdo tilmaamahaaga, iskuday inaad xoogga saarto xoojinta iyo macaanka xiriirka, iyo inaad yareysid helitaanka hanjabaado waaweyn oo ka wanaagsan oo aad uga dhigayso inay adeecaan. Tani macnaheedu maaha inaadan amar ku bixin, ama inaad qiil ka dhigato codsi kasta oo aad sameyso. Dhab ahaan, carruurtu waxay rabaan inay iskaashi yeeshaan.
1 Xeelado iskaashi
1.1 Tus carruurtaada!
1.2 Xusuusi carruurtaada sida ay adiga gaarka kuugu yihiin
Hoos waxaad kaheleysaa dhowr istaraatiijiyad wadashaqeyn oo loogu talagalay carruurta si ay u gutaan howlahooda iyagoon cabasho badan ...
Marka carruurtaadu wax qabtaan, wax kasta, oo kaa caawinaya si uun, ha ku maqlaan adiga oo qof ugu faanaaya. Waxa aad diirada saareysaa way sii kordhayaan, markaa hubi inaad ugu yaraan xoogaa dadaal ah ku ammaaneysid markay wax qabanayaan markii ugu horreysay ee aad dhahdo adigoon ku celin, ama markay u socdaan masaafada dheeriga ah inay wax saxaan. Ogeysii si gaar ah sida ay kuu dareensiisay markii ay guriga iskaashanayaan ama ay kaa caawiyeen inaad wax qabato.
Waxay dareemi doonaan wanaag marka aad u sheegto sida wanaagsan ee aad uga dareentay iskaashigooda iyo sida ay u caawisay inay wax walba si habsami leh u socdaan sidii aan sameeyay. Markay arkaan inay caawimaadoodu waxtar leedahay waxay dareemayaan wanaag waxayna ku celcelinayaan ficilka si ay u helaan dareen isku mid ah.
Xusuusi carruurtaada sida ay adiga gaarka kuugu yihiin
Xusuusi carruurtaada sida qaalibka ah ee ay adiga adiga kuugu yihiin. U sheeg maalin walba inay qalbigaaga ku jiraan oo ay waligoodba ahaan doonaan wax kastoo jira. Indhahaagu ha iftiimaan markay qolka soo galayaan. Hubso in codkaagu ku jiro diirimaad marka aad magiciisa sheegaysid. Si wada jir ah u daawada filimada guriga oo wadaaga sheekooyinka sida aad ugu faraxdeen xilliyadan xusuusta. Waxba ma xoojiyo xiriirka sida inaad qof u sheegto sida joogitaankaaga noloshaada ay u hodmisay. Noqo qof deeqsi ah: carruurta (iyo dadka waaweynba sidoo kale) si qoto dheer ayaa loo barbaariyaa iyagoo ogaanaya sida jiritaankoodu uga dhigayo adduunkaagu inuu ruxo.
Labadan istaraatiijiyadood ayaa carruurtaadu ku dareemi doonaan wanaag oo waxay lahaan doonaan dabeecad wanaagsan! Iskuday, waad yaabi doontaa!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Istaraatiijiyooyin Awood leh oo Caruurtaadu ugu Shaqeeyaan Guriga
Sidee loo siiyaa duugis wanaagsan